Wararka - Mitirrada socodka kala duwan ayaa loo isticmaalaa tayada kala duwan ee biyaha wasakhda
Mitirrada socodka kala duwan ayaa loo isticmaalaa tayada kala duwan ee biyaha wasakhda
Socodku waa tiro firfircoon, markaa cabbirka qulqulka waa tignoolajiyad adag, laga bilaabo jidhka socodka la qiyaasay, oo ay ku jiraan gaaska, dareeraha iyo dareeraha isku dhafan ee saddexda astaamood ee jirka ee dareeraha; warshadaha tusaale ahaan, wax soo saarka dareeraha - cabbirka biyaha, sababtoo ah nidaamka wax soo saarka ee kala duwan, waxaa loo qaybiyaa biyaha giraanta nadiifka ah,turbidized Biyaha wasakhda ah ee birta ah, biyaha wasakhda ah ee dhalaalaysa, biyaha wasakhda ah ee guriga iyo warbaahinta kale duwan.
Doorashada iyo codsigamitir socodka Sidoo kale way kala duwan yihiin marka loo eego tayada bulaacadaha kala duwan. Marka la isticmaalo, bulaacada la sii daayo ee kala duwan ayaa loo isticmaali karaa siyaabo kala duwanmitir socodka.
Ultrasonicmitir socodka waxay qabataa tignoolajiyada sare ee garaaca wadnaha, tignoolajiyada farsamaynta dijitaalka ah ee calaamadaha iyo tignoolajiyada sixitaanka qaladka, si mitirka qulqulka uu ula qabsan karo deegaanka goobta warshadaha, cabirku waa mid aad u habboon, dhaqaale iyo sax ah.Alaabtu waxay gaadhaan heerka sare ee guriga iyo dibadda, waxaa si weyn loogu isticmaali karaa Batroolka, kiimikooyinka, biraha, tamarta korontada, sahayda biyaha iyo meelaha dheecaanka.Waxa kale oo lagu cabbiraa xawaaraha socodka si ay u muujiso xajmiga socodka.
Inkastoo ultrasonicmitir socodka waxay soo muuqatay 1970-meeyadii, waa mid aad loo jecel yahay sababtoo ah waxaa laga samayn karaa nooc aan xiriir la lahayn, waxaana lagu xidhi karaa mitirka heerka biyaha ultrasonic si loo cabbiro qulqulka furan, oo aan soo saarin qas iyo iska caabin dareeraha. Ultrasonicmitir socodka waxaa loo qaybin karaa nooca kala duwanaanshaha wakhtiga iyo nooca Doppler sida waafaqsan mabda'a cabbiraadda.
Intaa waxaa dheer, ultrasonic Dopplermitir socodka ka samaysan saamaynta Doppler waxaa inta badan loo isticmaalaa in lagu cabbiro dhexdhexaad ah oo leh qayb ka ganaax qaar ka mid ah ama xumbo dhexdhexaad ah, taas oo uu leeyahay xaddidaadyo gaar ah, laakiin waxa ay xallisaa dhibaatada in wakhtiga kala duwan ultrasonic.mitir socodka kaliya waxay cabbiri kartaa hal dareere oo saafi ah, waxaana sidoo kale loo arkaa inuu yahay aalad ku habboon cabbirka aan la xiriirinlaba jiho socodka.
Electromagneticmitir socodka waa cusubmitir socodka si degdeg ah loo horumariyey iyadoo la horumarinayo tignoolajiyada elektiroonigga ah sannadihii 1950-aadkii iyo 1960-kii. Electromagneticmitir socodka Waa nooc ka mid ah aaladaha isticmaala mabda'a induction electromagnetic oo cabbiraya socodka dareeraha conductive iyadoo loo eegayo xoogga electromotive ee uu keeno dareeraha conductive ee ka baxsan field magnetic.Waxay leedahay taxane ah oo sifooyin aad u fiican, kuwaas oo xallin kara dhibaatooyinka kuwa kale.mitir socodka ma fududa in la isticmaalo, sida socodka wasakhaysan, cabbirka socodka daxalka.
Kanaalka cabbiraadda waa tuubo toosan oo siman, oo aan la xannibi doonin.Waxay ku habboon tahay cabbiridda dareeraha adag ee dareeraha ah ee laba-waji ah oo ay ku jiraan qaybo adag, sida saxarka waraaqaha, dhoobada, bulaacada, iwm.
Isbarbardhigga ultrasonic iyo electromagneticmitir socodka
Electromagneticmitir socodka iyo ultrasonicmitir socodka, sababtoo ah kanaalka socodka mitirku ma dhigo wax xannibaad ah, ma jiraan wax xannibayamitir socodka, waxay ku habboon tahay xallinta qiyaasta qulqulka dhibaatada adag ee fasalkamitir socodka, gaar ahaan cabbirka qulqulka afka weyn wuxuu leeyahay faa'iidooyin aad u fiican, waa mid ka mid ah horumarka degdega ah ee fasalkamitir socodka.
Ugu dambeyntii, loogu talagalay bulaacadamitir socodka xulashada, mid kastamitir socodka waxay leedahay faa'iidooyin iyo faa'iido darrooyinkeeda, habka daaweynta bulaacada, waa in lagu doortaa sida waafaqsan baahida dhabta ah. Kharashka ultrasonicmitir socodka waa hooseeyaa, saxnaanta cabbirku waa sarreeyaa, hawlgalku waa xasiloon yahay, rakibidda iyo dayactirka ayaa ku habboon, qiimuhu ma noqon doono mid sare iyo ka sarreeya korodhka dhexroorka tuubada, laakiin waxay noqon doontaa mid aad iyo aad qaali u ah sababtoo ah korodhka codka jidka.Electromagnetic-kamitir socodka wuxuu leeyahay cabbir xasiloon, baaxad ballaaran oo codsi ah wuxuuna cabbiri karaa noocyo kala duwan oo warbaahin ah, laakiin way fududahay in lagu farageliyo hirarka korantada. Sida dhexroorka tuubada uu kordho, qiimuhu wuxuu noqonayaa mid aad u qaali ah.